तिथि मेरो पत्रु » फेसबुक मा तिथि गर्न कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 23 2020 |2मिनेट पढ्न
के तपाईं कहिल्यै आफ्नो साथीको फेसबुक फोटो टिप्पणी गर्ने प्यारा भेट्यो छ? फेसबुक वास्तवमा पूरा गर्न ठूलो तरिका र मिति मान्छे हुन सक्छ. तथापि, त्यहाँ अर्डर गर्न मा निश्चित आफैलाई तपाईं छैन भनेर ई-दबाउने पालना गर्न नियमहरू छन्.
नियम #1: छैन मित्र पनि चाँडै के
वास्तविक कुराकानी वा परिचय डरावना अघि एक मित्र अनुरोध पठाउँदै. तपाईं एक कदम अघि फेसबुक बाला निर्णय गर्छन् भने, तपाईं एक फोटो जस्तै accidently गर्न चाहँदैनन् रूपमा बुद्धिमान सुनिश्चित. तपाईं फोन नम्बर सुरक्षित एकपटक पालना गर्न औंठी को एक राम्रो नियम छ, तपाईं गर्न सक्छन् फेसबुकमा त्यसपछि मित्र.
नियम #2: poking र धेरै फेसबुक संलग्नता जोगिन
सबैभन्दा नजरमा, poking वास्तवमा यो के गर्न साहस अप mustering बिना नमस्ते भन्दै एउटा तरिका हो. वास्तवमा, poking बाहिर सजिलो तरिका लिएर रूपमा हेरिएको छ. तपाईंको रुचि प्रोफाइल मा पनि धेरै आकर्षक लागि नै जान्छ. यदि जस्तै वा फोटो र स्थितिहरुमा टिप्पणी भन्दा तिमी माथि, यो तपाईं लागिपरेको लगेगा. तपाईंलाई लाग्छ सक्छ कि poking र फेसबुक संलग्नता आफ्नो flirtatious पक्ष देखाउने तरिकाहरू छन्, तिनीहरूले वास्तवमा छैनन्. थप, यो तपाईं व्यक्तिमा त्यसपछि अनलाइन आकर्षक मा थप रुचि हो कि देखाउने. यो आफ्नो सम्बन्ध बन्द-लाइन लिन महत्त्वपूर्ण छ.
नियम #3: अनुपयुक्त पोस्ट जोगिन
यो आफ्नो प्रेम चासो फेसबुकमा सबैलाई साथी छ कि मान सुरक्षित छ. कम्पनी CEOs गर्न सहकर्मीहरू गर्न परिवारका सदस्यहरूले देखि, अनुपयुक्त पोस्ट वा तस्वीर पोस्ट वा ट्याग गर्ने मात्र लाजमर्दो हुनेछ तर यो अन्य दिशा मा आफ्नो दबाउन रन बनाउन ठूलो तरिका हो.
नियम #4: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पृष्ठ शीर्ष निशान छ
गरेको यो सामना गरौं, जब हामी एक मित्र अनुरोध स्वीकार हामी व्यक्ति डंठल गर्न अगाडि बढ्न. आफ्नो प्रोफाइल किन साफ ​​गर्न आवश्यक यो छ. तपाईं अनुपयुक्त फोटो लाग्छ वा हुलाक हास्यास्पद छ सक्छ कि छैन, यसलाई आफ्नो दबाउन गरेको हास्य नहुन सक्छ. कुनै पनि निर्णय जोगिन, यसलाई आफ्नो हजुरआमा हेर्न लज्जित छैन भनेर एक मा आफ्नो प्रोफाइल बारी महत्त्वपूर्ण छ.
यी नियमहरू पालन गरेर, तपाईं चाँडै आफ्नो बाटो मा हुनेछ सफलतापूर्वक फेसबुक मा मिति.